Momba ny AngelBiss - AngelBiss Healthcare Inc.
AngelBiss Healthcare Inc. ny fifantohana voalohany ihany amin'ny fiovan'ny oksizenina concentrator ary afaka mifehy ny tahan'ny fiovaovana ao anatin'ny 0,1%, indrindra amin'ny fampandrosoana, fanondranana ary famokarana vokatra kalitao eo amin'ny sehatry ny Oxygen Therapy, Surgery Therapy, Asthma Therapy ary Diagnostic Therapy. Miaraka amin'ny tombony manokana sy fahaiza-manao injeniera matanjaka, AngelBiss dia nanome vahaolana avo lenta ho an'ny mpanjifa manerantany.
AngelBiss ny vokatra rehetra misy ny fenitra avo lenta sy ny fahombiazana tsara indrindra. Ny vokatra dia mahomby sy mora amin'ny tontolo iainana, tsotra hitazomana, izay nanaporofo ny maha-azo itokiana azy amin'ny serivisy marobe manerana an'izao tontolo izao.
Raha te hahalala bebe kokoa momba ny vokatra AngelBiss sy ny serivisy fampiharana dia kitiho izao manaraka izao:
Misafidiana AngelBiss, ankehitriny hampisondrotra ny fahamendrehan'ny fahasalamantsika